देउखुरीलाई ब्यावसायीक केन्द्र वनाउछौं - Tulsipur Online
देउखुरीलाई ब्यावसायीक केन्द्र वनाउछौं
Posted by News Desk | १२ भाद्र २०७४, सोमबार ०९:५७ |
-रत्नप्रसाद श्रेष्ठ:अध्यक्ष उम्मेदवार(लोकतान्त्रीक ब्यावसायीक प्यानल)
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको भदौ १० गते १४ औं साधारण सभा तथा अधिवेसनको उद्घाटन भएको छ । निर्वाचनको माहोल तयार भएको छ । दुई वटा प्यानल घोषणा गरेर ब्यापारीहरु चुनावी प्रचारमा होमीएका छन् । देउखुरीको लमहीमा लामो समय देखी ब्यापार ब्यवसाय गर्दै आउनु भएका रत्न प्रसाद श्रेष्ठ लोकतान्त्रीक ब्यावसायीक प्यानलवाट अध्यक्षको उम्मेदवार वन्नु भएको छ । स्वतन्त्र ब्यवसायीको तर्फवाट प्यानल घोषणा भैसकेपछी भएको छलफलफल पछी स्वतन्त्र ब्यवसायी र प्रजातान्त्रीक ब्यावसायीक संघ विच भएको तालमेलवाट रत्न प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा लोकतान्त्रीक ब्यावसायीक प्यानल घोषणा भएको हो । देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर तुलसीपुर अनलाईनकर्मी दशरथ घिमिरेले लोकतान्त्रीक ब्यावसायीक प्यानलका अध्यक्षका उम्मेदवार रत्नप्रसाद श्रेष्ठ संग गर्नु भएको कुराकानीको सार संक्षेप
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको साधारण सभा तथा अधिवेसन उद्घाटन भैसकेपछी निर्वाचनको तयारी कसरी अघि वढेको छ ?
देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको भदौ १० गते साधारण सभा तथा अधिवेसनको उद्घाटन सम्पन्न भएको छ । देउखुरीमा उद्योग ब्यवसायको विकास, उद्योगी, ब्यवसायीहरुको ब्यावसायीक सुरक्षा, हक अधिकार, उपभोक्ता प्रति उत्तरदायी तथा सम्वृद्ध देउखुरीको विकासको लागी हामी प्रतिवद्ध छौं ।
निर्वाचन वाट कुशल नेतृत्व आउने छ । म र मेरो टिमको उम्मेदवारी घोषणा भैसकेको अवस्थामा ब्यापारीको माझमा हामी गैरहेका छौं । ब्यापारीहरुका गुनासाहरु संकलन गर्ने र उहाँहरुले राख्नु भएका गुनासाहरुको सम्वोधनको लागी कार्ययोजना पनि वनाउने छौं ।
यहाँले ब्यापारीहरुका गुनासाहरु संकलन गरीरहेको वताउनु भयो । खासमा ब्यापारीहरुको गुनासा कस्ता छन् ?
यहाँले सही कुराको उठान गर्नु भयो । देउखुरीको लमही प्रुमुख ब्यापारीक केन्द्र हो । यहाँको ब्यापार ब्यवसाय देउखुरीको समग्र आर्थिक विकास संग जोडीन्छ । लमही क्षेत्रको ब्यापारकोे विकास जुन रुपले हुनु पर्ने हो त्यस अनुरुप नभईरहेको गुनासो ब्यापारीहरु वाट आएको छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गले लमहीलाई छोएको छ तर, लमहीको बजार विस्तार, यहाँको ब्यापार प्रत्येक बर्ष घट्दो छ । उपभोक्ता मैत्रि बजारमा वातावरण(सार्वजनिक शौचालय, प्रतिक्षालय, सफा पिउने पानीको ब्यवस्था) साथै अनियन्त्रित झोले ब्यापारी र दैनिक उपभोग्य वस्तु लगाएत लत्ता कपडामा सिमामारीको भारतीय बजारमा निर्भर हुनु लमही बजार क्षेत्रमा ब्यापार घट्नुको प्रमुख कारण हो ।
चार्ड पर्वको समयमा लमहीको ब्यापारमा वृद्धि भएन् । देउखुरीका उपभोक्ताहरु भारतीय बजारमा गएर सामानहरु किनेका पाएका छौं । झोले ब्यापारी र सिमापारीको ब्यापार ब्यवसायलाई न्यूनिकरण गर्ने विषयमा ध्यान दिन ब्यापारीहरुले आग्रह गर्नु भएको छ । यो नै हाम्रो टिमको मुख्य एजेण्डा हो ।
लोकतान्त्रीक ब्यावसायीक प्यानलले झोले ब्यापारी नियन्त्रण गर्न सम्वन्धित पक्ष संग समन्वय गरी समस्याको समाधान तर्फ अग्रसर हुने छौं । भन्सारमा कडाई नहुदा सिमा पारीको बजारमा भिड लाग्ने गरेको छ । सिमामा कडाई गर्न हामीले पहल गर्ने छौं । सिमा पारीको बजारमा उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष रुपमा ठगीने गरेका छन् । यो कुरा उपभोक्तालाई वुझाउन जरुरी छ । यसका लागी हामीले उपभोक्ताको लागी समेत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौं ।
सिमापारीको बजारमा नेपाली उपभोक्ताको आकर्षण वढ्नुको पछाडी के कारण देख्नुहुन्छ ?
विडम्वनाको कुरा कतिपय उपभोक्तालाई सिमापारी बजारमा वस्तु सस्तो पाईन्छ भन्ने भ्रम छ । त्यस्ता उपभोक्ताहरुलाई सवै सस्तो वस्तु गुणस्तर युक्त हुदैनन् र प्रत्यक्ष ब्यक्तिगत रुपमा सामान आयात गर्दा देशको राजश्वमा समेत कमी आउने र यहाँ रहेका ब्यवसायहरुलाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने भएको कुरा जानकारी छैन् ।
साथै कतीय अवस्थामा उपभोक्ताहरु हिवास कितावको क्रममा समेत ठगीएको पाईन्छ । यती मात्र नभएर उपभोक्ताले आउने जाने समयको मुल्य र अन्य गर्नुपर्ने खर्चहरु नजोडेको कारणले गर्दा वस्तु सिमा पारी सस्तो पाइएको भ्रम उपभोक्तामा छ । कतीय वस्तु भन्सार दरको कारणले गर्दा ब्यवसायीले यहाँ ल्याएर विक्रि गर्ने मुल्य भन्दा सिमा पारी केही सस्तोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
मुख्य एजेण्डाहरु के छन् ?
मैले अघि पनि भनीसकेको छु । हामीले तिन वटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । पहीलो ब्यवसायी, दोस्रो उपभोक्ता र तेस्रो समग्र यो ठाउँ । ब्यवसायीको लागी कर सम्वन्धि सचेतना कार्यक्रम, ब्यवसाय दर्ता सम्वन्धि सल्लाह, वित्तिय सल्लाह, सम्वन्धित पक्ष संग समन्वय गरी बजारलाई स्वच्छ तथा सफा राखी ग्रहाक आउने वातावरण निर्माण गर्ने छौं ।
झञ्जटीलो कर तथा कतीपय अवस्थामा एउटा ब्यवसायीले धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था भएकोले सम्वन्धित पक्ष संग समन्वय गरी ब्यवसायीक हितको लागी काम गरिने छ । यस्तै उपभोक्ताको लागी बजारमा सार्वजनिक शौचालय, खानेपानीको धारा, सार्वजनिक प्रतिक्षालय वनाउनुका साथै यातायात ब्यवसायी संग समन्वय गरी वेलुकी सम्म गाउँ संग जोडीने गरी यातायात सञ्चालन गर्न समन्वय गरीने छौं ।
र समग्र देउखुरीको लागी हाम्रो लमही, राम्रो लमही भन्ने मुल उद्देश्यका साथ पर्यटन, कृषि पर्यटन, स्थानीय कला संस्कृतीको विकास तथा बजारलाई सफा तथा हरियाली वनाउने तर्फ लाग्ने छौं ।
यहाँले तिन वटा विषयलाई उठान गर्नुभयो । त्यस भित्र खास के के कुरा छन् ?
पर्यटन ब्यवसायको सम्भावना
आर्थिक सम्वृद्धिको आधारनै पर्यटन ब्यवसाय हो । देउखुरीमा यसको प्रसस्त सम्भावना छ । लुम्वीनी र स्वर्गद्धारीई केन्द्रित गरेर लमहीमा पर्यटन ब्यवसाय चलाउन सकिन्छ ।
प्यूठानको स्वर्गद्धारी र कपीलवस्तुको लुम्वीनीमा आउने पर्यटनहरुको ट्रान्जीट लमहीलाई वनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा लमहीको होटल ब्यवसाय सहीत अन्य ब्यवसाको विकास हुन्छ । हामीले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्र रिहारको बगारबाबा, जखेरा ताल, देवीकोट, शिवगढी, जंगलकुट्टीमा पनि पर्यटकहरु भित्रयाउन सकिन्छ ।
कर शिक्षाको ब्यवस्था
धेरै ब्यवासयीहरुलाई कर शिक्षाको वारेमा जानकारी छैन् । कर कार्यालय भन्दा वित्तिकै डराउने अवस्था छ । यो अवस्थावाट ब्यापारीहरुलाई सजिलो वनाउनेको लागी कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छौं । ब्यवसायीहरुलाई मुल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क तथा सिम म्याच सम्वन्धमा कर कायाृलय र ब्यवसायीहरु विच कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तथा कर शिक्षाकोको ब्यवस्था मिलाउने छौं ।
साना तथा ठुला सवै ब्यवसायीहरुको ब्यावासायीक सुरक्षाको लागी विमा गराउन उत्प्रेरीत गराउने छौं । विमा सचेतना कार्यक्रम गरेर अनिवार्य रुपमा ब्यवसायको विमा गराउन अनुरोध सहीतको कार्यक्रम गर्नेछौं ।
घर भाडा र घर वाहाल कर
खासगरी ब्यवसायीहरु घरधनी वाट मर्कामा परेका छन् । घर भाडामा लगाउदा दुईपक्षीय सम्झौता लिखीत रुपमा हुन आवश्यक छ । यसरी सम्झौता नगरी घर भाडामा लगाउदा ब्यवसायीलाई घरधनीले जतीवेला पनि हटाउन सक्ने समस्या छ ।
यसको समाधानको लागी अनिवार्य दुईपक्षीय सम्झौता गर्नको लागी पहल गरी उद्योग वाणिज्य संघको रोहवरमा कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं । अर्काे कुरा घर बहाल कर स्वयम घरनधनीवाट असुल गर्ने प्रकृयाका लागी नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायमा पहल गर्ने छौं । ब्यावसायी र घरधनीको विचमा समन्यात्मक छलफलको आयोजना गरी निचोढमा पुग्ने छौं ।
देउखुरीको सम्वृद्धि कोईलावास नाका
देउखुरीको आर्थिक सम्वृद्धि र विकास कोईलावास नाका संग जोडीएको छ । यो नाका सूचारु गर्न देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्ने छ । यसका साथै बजार क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग सडक विस्तार हुदा धेरै क्षती हुने आँकलन गरिएको छ ।
कम क्षतीमा सडक विस्तारको लागी सम्वन्धित निकाय संग पहल गर्नेछौं । यसका साथै सडक विस्तार हुदा हुने क्षतीको उचित मुआब्जा सम्वन्धित पक्षलाई दिलाउनको लागी समन्वय गर्ने छौं ।
सरसफाईको नमुना शहर
लमहीलाई सरसफाईमा नमुनाको लागी उद्योग वाणिज्य संघले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्छ । त्यसको लागी बजारलाई सुन्दर र सफा वनाउन सप्ताह ब्यापी सरसफाई अभियान ग्रिन लमही÷क्लिन लमही चलाउने, सार्वजनिक स्थलमा फोहर संकलनको लागी डस्टविन राख्ने छौं । फोहर ब्यवस्थापनको लागी स्थानीय सरकार संग समन्वय गरी अन्य कार्यक्रमहरु अघि वढाईने छ ।
ब्लड बैंक र सर्पदशं उपचार केन्द्र
लमहीमा सरकारी अस्पताल भैसकेको छ । तर, यहाँ ब्लड बैंक स्थापना नहुदा सल्यकृया सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन् । सवैको सरोकारको विषय भएको ब्लड बैंक स्थापनाको लागी निजि क्षेत्रवाट हुने सर सहयोग र पहल गर्नेछौं । अर्काे कुरा शर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाको लागी भैरहेका प्रयास र पहललाई सार्थक वनाउन मेरो कार्यकालमा पूर्णता पाउने छ ।
मतदाताले यहाँलाई कसरी चिन्ने ?
लमहीमा ब्यवसाय गर्न थालेको दुई दशक भैसकेको छ । पुनम हार्डवेयर्स वाट मेरो ब्यवसाय सुरु भएको हो । लमही जेसीजको वर्ष २००६ को अध्यक्ष भएर काम गर्ने अवसर पाए । २०६२:०६३ को जनआन्दोलनमा राजनैतिक दलहरु सडकमा उत्रन नसकेको अवस्थामा लमही जेसीजको अध्यक्षको हैसीयतमा मेरो नेतृत्वमा सडकमा उत्रिएका थियौं ।
त्यसपछी अन्य राजनैतिक दल र सामाजिक संघ संस्थाहरु वल्ल सडकमा आएका थिए । नेपाल जेसीजको सन् २००८ मा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएर देशभर नेतृत्व गरेर सासन ब्यक्तिको होईन् विधिको हुनुपर्छ भनेर देशभर अभियान थालेका थियौं । देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल काम गर्ने अवसर पाए ।
ब्यापारीहरुको समस्यालाई नजिकवाट नियालेको छु । समस्या समाधानको लागी दिनरात नभनेर खटीने छु । यसका साथै राप्ती अञ्चल ट्रक ब्यवसायी समितिको उपाध्यक्ष भएर काम गरीरहेको छु । सवै क्षेत्रको अनुभव संगालेको छु । यो अनुभवलाई प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
ब्यापारीहरुको समस्या समाधानको लागी जुनसुकै वेला पनि खटीने छु । म र मेरो टिमले ब्यापारीको पक्षमा रिजल्ट देखीने काम गर्ने छ । देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघको गरिमा वचाउदै ब्यापारीहरुलाई यो शुद्ध ब्यापारीहरुकै संस्था हो भन्ने महसुस गराउने छौं।
Previousबधाई तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
Nextनेकपा एमाले प्यूठानका सस्थापक नेता विर बहादुर सिंहको निधन